Wararka - Sidee loogu rogaa dunta duullimaadyada geedi socodka makaanaynta?
Dunta diyaaradda waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta dhamaadka, qaabkeeda cadayduna waxay lamid tahay dunta leyliga, laakiin dunta fidsan badanaa waa dunta lagu farsameeyo wejiga dhamaadka silsiladda ama diskiga. Jidka aaladda leexashada ee la xiriirta qalabka shaqada markii la farsameynayo dunta diyaaradda waa wareegga Archimedes, kaas oo ka duwan midka caadiga ah ee mashiinka silsiladaysan. Tani waxay u baahan tahay hal kacaan oo ka mid ah qalabka shaqada, gaadhiga dhexena waxa uu u dhaqaajiyaa garoonka shaqada. Hoos waxaan si gaar ah ugu soo bandhigi doonnaa sida loogu weecinayo dunta diyaaradda makiinado hawsha.
1. Astaamaha aasaasiga ah ee dunta
Kala-goysyada isku-xidhka ah ayaa si ballaadhan loo isticmaalaa inta lagu jiro farsamaynta, oo leh dunyo dibedda iyo gudaha ah. Waxaa jira afar nooc oo waaweyn marka loo eego qaabka astaamaha dunta: dunta saddex-geesoodka ah, dunta trapezoidal, dunta jilacsan iyo dunta afar geeslaha ah. Marka loo eego tirada xarkaha dunta: hal xaraf iyo dun xarrago badan leh. Mashiinnada kala duwan, shaqooyinka qaybaha dunta leh badanaa waxaa ka mid ah kuwa soo socda: mid ayaa loogu talagalay isku xirida iyo isku xirka; kan kalena waa gudbinta awoodda iyo beddelaadda qaabka dhaqdhaqaaqa. Mawduucyada saddex-geesoodka ah ayaa badanaa loo isticmaalaa isku xirnaanta iyo xoojinta; silsiladaha trapezoidal iyo rectangular ayaa badanaa loo isticmaalaa si loogu gudbiyo awooda loona badalo qaabka dhaqdhaqaaqa. Shuruudaha farsamo ee ay wataan iyo qaababka ay u shaqeeyaan ayaa leh farqi gaar ah sababo la xiriira adeegsigooda oo kala duwan.
2. Habka loo farsameeyo dunta diyaaradda
Marka lagu daro isticmaalka aaladaha caadiga ah ee mashiinka, si si wax ku ool ah loo yareeyo dhibka ka baaraandegidda ee dunta makiinadaha, kor loogu qaado hufnaanta shaqada, loona hubiyo tayada farsamaynta mashiinka, mashiinada CNC ayaa badanaa la isticmaalaa
Seddex amarka G32, G92 iyo G76 ayaa badanaa loo isticmaalaa qalabka mashiinka CNC.
Amarka G32: Waxay ka baaraandegi kartaa xarig hal-istaroog ah, hal barnaamij oo barnaamij ah ayaa culus, barnaamijkuna waa ka dhib badan yahay;
Amarka G92: Wareeg goynta xargaha ah oo fudud ayaa la ogaan karaa, taas oo waxtar u leh fududaynta wax ka beddelka barnaamijka, laakiin waxay u baahan tahay qaybta shaqada ee bannaan in la qallajiyo ka hor.
Amarka G76: Ka gudubka cilladaha Taliska G92, qeybta shaqada waxaa lagu farsameyn karaa min madhan ilaa dunta dhammaatay hal mar. Badbaadinta waqtiga barnaamijka waxay caawimaad weyn u tahay fududaynta barnaamijka.
G32 iyo G92 waa qaabab goyn toos ah, labada geesood ee wax jariduna way fududahay in la xidho. Tani badanaa waxay sabab u tahay shaqada isku mar ee labada dhinac ee daabka, xoogga goynta badan iyo dhibka jarista. Marka dunta leh mug weyn la jaro, geesaha goynta ayaa dhaqso u xirta sababo la xiriira qoto dheerida goynta, taas oo keeneysa qalad dhexroorka dunta; si kastaba ha noqotee, saxsanaanta qaabka iligga la farsameeyay ayaa sarreeya, markaa guud ahaan waxaa loo isticmaalaa farsameynta dunta yar yar. Sababtoo ah goynta dhaqdhaqaaqa qalabka waxaa lagu dhammeeyaa barnaamijka, barnaamijka mashiinku wuu dheer yahay, laakiin wuu ka dabacsan yahay.
G76 wuxuu iska leeyahay habka goynta goynta. Sababtoo ah waa geedi socod hal dhinac ah, cirifka saxda ah ee saxda ah waa sahlan tahay in la waxyeeleeyo lana xirto, sidaa darteed dusha sare ee mashiinka mashiinku ma ahan mid toosan. Intaas waxaa sii dheer, mar xagasha xagasha goynta ay isbedesho, saxnaanta qaabka iliggu waa liitaa. Si kastaba ha noqotee, faa'iidada habkan makiinad-sameynta ayaa ah in qoto-dheerida goynta ay hoos u dhaceyso, culeyska qalabku uu yar yahay, iyo ka-saarista jabku way fududahay. Sidaa darteed, habka wax-u-qabadka wuxuu ku habboon yahay ka-shaqeynta dunta xargaha waaweyn.